Shacabka Garoowe oo Si Kedis ah u Arkay Khayre oo Dhex Lugaynaya Barxada Magaalada [DAAWO] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Shacabka Garoowe oo Si Kedis ah u Arkay Khayre oo Dhex Lugaynaya Barxada Magaalada [DAAWO]
Shacabka Garoowe oo Si Kedis ah u Arkay Khayre oo Dhex Lugaynaya Barxada Magaalada [DAAWO]
Ra’isul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo labadii maalmood ee u dambeeyay ku sugnaa magaalada Garoowe, halkaasi oo uu uga qaybalayo shirka wadatashiga madaxda federaalka iyo dowlad xubnineedyada ayaa saaka si kedis ah loogu arkay barxada magaaladda.
Ra’isul wasaaraha oo weheliyeen ciidamo ilaalo oo kooban ayaa lugeeyay wadooyinka Garoowe, isagoo shacabka shaah iyo sheeko kula wadaagay qaar ka mid ah meheradaha lagu shaaheeyo ee ku yaal barxada Garoowe iyo xaruntii hore ee madaxtooyada Puntland. Waxaa kaloo uu booqday qaar ka mid ah carwooyinka iyo goobaha ganacsiga ee Garoowe.
Wuxuu dhagaystay cabashooyinka iyo talooyin ay u soo jeediyeen odoyaashii, dhalinyaradii iyo haweenkii uu kula kulmay goobaha uu booqaday. Waxaa uga mahadceliyay sida diiran ee shacabku ay markasta u soo dhaweeyaan, isagoo u duceeyay shacabka iyo magaaladda Garoowe.
Booqashada Khayre ee Magaaladda Garoowe ayaa imaanaysaa iyadoo dhammaan madaxdii federaalka iyo Dowladaha xubnaha ka ah uu maanta shir gogol xaar ah uu uga furmay xarunta madaxtooyada ee Garoowe.